Mvura-yakavakirwa zvipikiri - Maitiro ekuita iyi yepakutanga manicure maitiro | Bezzia
Mvura-yakavakirwa zvipikiri: Maitiro ekuita iyi yepakutanga manicure maitiro?
Susana godoy | 01/12/2021 12:00 | Yakagadziridzwa ku 30/11/2021 18:54 | Runako
Sezvatinonyatsoziva, kune akawanda manicure sarudzo dzatinadzo. Kubva pane yakapfava kusvika kune yakanyanyisa uye yepakutanga. Zvipikiri zvemvura Ivo ndevamwe vavo uye tinoda nzira iyi. Mukuwedzera, kana iwe ukatevera matanho akaratidzwa, iwe uchaona kuti ichave yakawanda kupfuura yakakwana.
Iwe unozogadzira abstract uye ane mavara maitiro kuti ape iyo yepakutanga kumaoko edu, ayo atinotsvaka zvakanyanya. Rangarira kuti kuzviita, chete iwe uchada enamels emavara ako aunofarira, girazi remvura uye mamwe mazino kana mapini. Une zvese zviripo here? Ipapo tinotanga!
1 Nzira yekuita misumari nemvura
2 Kushongedza mvura-based misumari
3 Sticker style mvura-based misumari, imwe nzira yekuita iyi manicure
Nzira yekuita misumari nemvura
Sezvauchazofungidzira, kune nzira dzinoverengeka dzatinofanira kugadzira zvipikiri zvedu zvine mvura. Asi imwe yeinonyanya kuzivikanwa ndeiyi yatinokuudzai. Kuti tiite izvi, tinofanira kuva negirazi remvura paruoko. Ino ndiyo nguva yekusarudza maenamel atinoda kushandisa. Munyaya iyi, unogona kusarudza marudzi ese emavara kana rumwe ruvara uye akati wandei mashades ayo, iyo ichagadzira abstract effect yeyakanyanya yepakutanga.
Tinofanira kurangarira izvozvo kwete ese enamels achashanda, nekuti mamwe haazoparadzi mumvurasezvatinoda. Saka tinogona kuedza kutanga. Sei? Zvakanaka, nekudonhedza donhwe reakadaro enamel mumvura uye kumirira masekondi mashoma kuti ripararire. Ikoko uchaona kuti vamwe havaiti. Donhwe rega rega raunowedzera richawedzera mumvura mudenderedzwa. Kubva pairi, nerubatsiro rwehuni mazino kana pini, unogona kuiumba. Ndipo panopinda chikamu chako chekugadzira zvakanyanya, sezvo uchigona kugadzira nyeredzi, spirals kana chero chaunoda. Nekuti ndiwo uchave mufananidzo wekupedzisira watichapfeka pazvipikiri zvedu.
Kushongedza mvura-based misumari
Kana tave nematanho ese apfuura, inguva yekushandisa hwaro kuchengetedza zvipikiri zvedu. Mukuwedzera, tinofanirawo kuchengetedza zvigunwe zvedu, nokuti isu tichavasuma mumvura uye enamel ichange yakazara paganda. Nokudaro, hapana chinhu chiri nani pane kuvhara chigunwe nematepi ekunamatira. Inguva yekuisa zvipikiri mumvura uye iwe uchaona kuti dhizaini yako inoteedzerwa sei kwavari. Paunenge uchiabvisa kubva mumvura, mirira masekondi mashomanana kuti aome zvishoma. Zvichakadaro, bvisa tepi kubva paminwe yako uye iwe unogona kupfuudza swab yekotoni kutenderedza kuti ubvise chero zvisaririra zveenamel. Kana zvipikiri zvaoma, tichavapfuudza iyo Top Coat kuti vagadzirise uye ndizvozvo.
Sticker style mvura-based misumari, imwe nzira yekuita iyi manicure
Takataura nezve nzira yakakosha yekuita zvipikiri zvemvura, asi haisi iyo yega. Matanho ekutanga akafanana, ndiko kuti, tinoda girasi remvura uye enamels yatichadurura kudonha nedonhwe kusvikira vawedzera. Tichavaumba asi munyaya iyi hatisi kuzoisa nzwara dzedu mavari, asi isu tichamirira maminetsi mashomanana kusvikira enamel yava compact mumvura uye isu tinogona kuibvisa sekunge iri sticker.
Tinoibvisa nokungwarira uye tinoicheka kuti tiende tichiisa zvidimbu pambambo imwe neimwe. Tinoisa chidimbu pachipikiri, chengetedza zvakanaka, uchiedza kuti usasiya mabhubhu. Zvadaro, tinopfuudza chigadziko che glitter polish kuti tikwanise kugadzirisa sticker kune zvipikiri, asi tichaona kuti zvakasara zvichabuda sei zvega. Unogona kuibvisa nema tweezers kuti zvikuitire nyore. Inongosara yekudzokorora matanho akafanana nemamwe misumari uye iwe uchaona kuti vakakwana sei. Iwe uchabvisa zvinyorwa zveenamel zvingave zvakasara paganda uye iwe uchapedza basa racho nemucheka wepachena enamel. Uri kuzozviita here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Mvura-yakavakirwa zvipikiri: Maitiro ekuita iyi yepakutanga manicure maitiro?
ICONS: Uterqüe zvipfeko zvakakosha zvevakadzi
4 getaways muSpain kwemwedzi yechando